ရက် ၃၀ အစီရင်ခံစာ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းကူညီနိုင်မယ့်အရာကြီးများစာရင်း! - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ရက် ၃၀ အစီရင်ခံစာ။ ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးခဲ့ပြီးကောင်းကောင်းကူညီနိုင်တဲ့စာရင်းကောင်း
30D, တာဝန်အစီရင်ခံစာ။ ငါ့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်သင်ကူညီစေခြင်းငှါအရာ၏ဂရိတ်စာရင်း!
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ သူနှင့် nofapstronaughts၊ ကျွန်ုပ်လုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ဘူး။ အခြားပို့စ်မျိုးတော့ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်ကိုကူညီပါကသင့်အားအထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အရာများကိုစာရင်းပြုစုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
(ငါ့အအစီအစဉ်များအတွက်မဟုတ်သောအရာနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစဉ်အမြဲငါပြန်သွားကြသည်ဆိုပါက,) သူတို့လည်းတခြားသူတွေကိုကူညီစေခြင်းငှါသကဲ့သို့ငါ့ကိုကူညီပစ္စည်းပစ္စယ၏သေးငယ်တဲ့စာရင်းထဲမှာ Making:
nofap လာရောက်ပူးပေါင်း။ သင်၏အကူအညီမပါဘဲရက်အနည်းငယ်သာကြာသည်အထိကြာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ငါသင်ယူလေ့လာလိုတဲ့လေးနက်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ်ယူခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခြင်း။ YBOP နှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများ၏ပတ် ၀ န်းကျင်မှမည်သည်တို့နှင့်ချိတ်ဆက်သည်ကိုများစွာဖတ်ပါ။ ငါ့မှာစွဲလမ်းနေတဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့လက္ခဏာ (၃) ချက်ရှိတယ်။
ငါအကြီးအကျယ်ရမ္မက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံးမှာကျွန်မရဲ့ရောင်စုံဘလောက်တုံးများ sorting ကောင်းတစ်ဦးကုထုံးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသွင်သဏ္ဌာန်အားဖြင့်, အရောင်အသုံးပြုပုံအမျိုးအစားအားဖြင့်။ ဒါ့အပြင်လမ်းလျှောက်သွား။ ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်, ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ရမ္မက်နှင့်စွဲအကြောင်းကိုသုတေသနပြုပိုမိုလွယ်ကူအရာအားလုံးကိုဖန်ဆင်းသောအရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
Norman Doidge မှ“ ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလဲစေသည့် ဦး နှောက်” ကိုဖတ်ခြင်း။ သင်၏ ဦး နှောက်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ထင်သောအရာကိုပြောင်းလဲပစ်လိမ့်မည်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုအကြောင်းအခန်းတစ်ခန်းရှိတယ်။ nofap မတိုင်မီက Roy Baumeister မှ“ Willpower: the Greatest Human Strength ကိုပြန်လည်ရှာဖွေခြင်း” ကိုလည်းဖတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖတ်ခြင်း၊ willpower သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းထံမှမည်သို့မျှော်လင့်ရမည်၊ မည်သို့လေ့ကျင့်ရမည်ကိုပြောပြသည်။ Doidge နှင့် Baumeister နှစ် ဦး စလုံးသည်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောသိပ္ပံပညာရှင်များဖြစ်ကြပြီးစာအုပ်များသည်သိပ္ပံနည်းကျချဉ်းကပ်မှုရှိသည်။ သူတို့သည်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်မဟုတ်လျှင်သင်အိပ်မက်မက်နိုင်သည့်စာအုပ်မျိုးမဟုတ်ပါ။ အလေးအနက်ထား shit, အလွန်အမင်းသူတို့နှစ် ဦး စလုံးစာအုပ်တွေအကြံပြုပါသည်။
google မှာ Eckhart သေဆုံးသူဆွေးနွေးချက်အကဲခတ်: http://www.youtube.com/watch?v=Bsf7FXPgQ_8 သင်အမှန်တကယ်ဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာရရှိရန်အလွန်ကြီးစွာသော။ မင်းရဲ့အတွေးတွေမဟုတ်ဘူး မင်းရဲ့ခံစားချက်မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းဟာမင်းရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဟုတ်ပါဘူး သငျသညျ3အားလုံးအရပျကိုယူနှင့်အပြန်အလှန်ရသောပိုမိုနက်ရှိုင်းတစ်ခုခုပါပဲ။ တခါတရံစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုကိုသက်သာစေပြီးသင်၏အတွင်းငြိမ်သက်မှုကိုတိုးပွားစေသည်။ သူ၏စာအုပ်“ ယခုပါဝါ” သည်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်စာရင်းတွင်ပါသည်။
အဆိုပါကယ်လီ McGonnigal ဗီဒီယိုကိုအကဲခတ်: http://www.youtube.com/watch?v=V5BXuZL1HAg လူအပေါင်းတို့ကြောင်းအရာများကိုသင်ယူခြင်း။
1) သင့် Willpower ဇီဝြဖစ်စဉ်ဆုံးမသှနျ
၁.၁) အိပ်ချိန်> ၈ နာရီ
1.2) ဘာဝနာမှာအနည်းဆုံး 15 မိနစ်တစ်နေ့
အပြစ်ရှိတယ်မကူညီဘူး လွတ်ပါ။ ငါတို့ပြန်လာရင် ...
2.1) သတိ, ခံစားချက်တွေကိုအသိအမှတျပွု။
2.2) ဘုံလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်။ လူတိုင်းယခုပြီးတော့ relapses ။
3) သင့်အနာဂတ်မိမိကိုယ်ကို Guture မိမိကိုယ်ကိုနှင့်အတူမိတ်ဆွေများက Make တစ်လူစိမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူနှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့် Willpower တက်သွားပါလိမ့်မယ်။
3.3) နည်းသောကြွေးမြီ / ပိုပြီးချမ်းသာကြွယ်
3.4) သည် သာ. ကောင်း၏ကျန်းမာရေး
3.5) သင့်အနာဂတ်မိမိကိုယ်မိမိသိရန် Get
3.5.1) သင့် ps ရန်သင့် fs ထံမှစာတစ်စောင်ရေးထား
3.5.2) ကအနာဂတ်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန် Send
သင်၏အောင်မြင်မှုကို Track => ရေရှည်တွင်လျှော့ချပါ
4.1) အနာဂတ်အပြုအမူနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကောင်းမြင်ယနေ့ Self-အလိုလိုကျလှနျးခွငျးလိုင်စင်ရ
4.2.7) တိကျသောအဘယျသို့အရာငါသည်ဤအတားအဆီးပေါ်ထွန်းတော်မူသောအခါ, ငါ၏ပန်းတိုင်ပြန်ရရှိရန်ပြုကြလိမ့်မည်နည်း
5.1) ကအတွေး, တဏှာသို့မဟုတ်ခံစားချက်ကိုသတိပွု
5.2) အတွင်းအတှေ့အကွုံမှ Accept နှင့်တက်ရောက်ရန်
5.3) သင့်ဦးနှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ခဏရပ်ရန်အခွင့်အလမ်းများနှင့်အစီအစဉ် Breathe နှင့်ပေး
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယို။ သူမ၏စာအုပ်“ Willpower Instict” သည်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်စာရင်းတွင်ပါသည်။
ကျပန်းအင်တာနက်အချိန်အကြီးအကျယ်ဖြတ်တောက်။ ငါ nofap ခရီးကိုစလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျပန်းပစ္စည်းတွေဖတ်နေဖို့အတွက် interweb ကိုကျပန်းကျပန်းရှာဖွေလေ့ရှိပါတယ်။ Reddit တစ် ဦး တည်းတွင်နေ့စဉ်ဖတ်ရန်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာများရှိသည်။ သင်တစ်ပတ်တစ်ပတ်လိုချင်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီ့ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးတစ်နေ့ကိုတစ်နေ့ကိုတစ်နာရီတောင်မကြည့်ဘဲခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Nofap နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများ၊ အလုပ်နှင့်အခြားသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်မှုများသည် ၁ နာရီသတ်မှတ်ချက်တွင်မပါပါ။ ဒါဟာကျပန်းပစ္စည်းတွေအတွက်ပဲ။
ဘာသာစကားတစ်ခုတက်ယူခြင်း။ fapping နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားမလည်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေတာနဲ့အမျှ neuroplasticity ကို activate လုပ်ဖို့အသစ်တစ်ခုကိုသင်ယူရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ဒီ site ကောင်းကိုငါတွေ့ပြီ http://www.memrise.com ဘယ်မှာသင်တိုတိုနေ့စဉ်သင်ခန်းစာများအတွက်အခမဲ့နီးပါးဘာမှသင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားတစ်ခုကိုအချိန်အကြာကြီးသင်ယူချင်တယ်၊ အခုငါလုပ်နေတယ် !! ပစ္စည်းအသစ်များကိုသင်ယူခြင်းသည်သင်၏အာရုံခံဆဲလ်၏သက်တမ်းကိုတိုးစေသည် (Doidge's book) ။
wank ၏အစားလမ်းလျှောက်။ Doidge ၏စာအုပ်တွင်ကျွန်ုပ်ဖတ်ရှုခဲ့သည့်အတိုင်းထိုလမ်းလျှောက်ခြင်း (သို့) PE သည်သင်၏ hypothalamus ထုတ်လုပ်သည့်အာရုံခံဆဲလ်ဆဲလ်များတိုးပွားစေသည်ကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်မိနစ် ၃၀ မှ ၁ နာရီအကြားလမ်းလျှောက်နေသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုရှင်းလင်းခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အကောင်း!
ဥယျာဉ်။ သဘာ ၀ နှင့်အဆက်အသွယ်ပြုသည်။ အဲဒါကျွန်တော့်ဝါသနာအသစ်ပါ။
ပိုမိုကျန်းမာစားခြင်း ၎င်းသည်သူနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်မှုမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလူသားတစ် ဦး ဖြစ်လာစေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအစာစားလိုကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါမြန်မြန်ဆန်ဆန်အစာထွက်လုနီးပါးငါ paleo ပစ္စည်းပစ္စယကြိုးစားနေတာပါ။ သင်ဤသို့ ၀ င်ရောက်လိုပါက The Food Revolution သည်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။ http://www.youtube.com/watch?v=FSeSTq-N4U4 ကျန်းမာသန်စွမ်းအစာစားခြင်းကပိုဆီဥနှင့်လျော့နည်း carbs စားသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါအများကြီးပိုတီထွင်ဖန်တီးမှုခံစားရတယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကလှပသောအမျိုးသမီးများအပါအ ၀ င်ငါအရင်ကမတွေ့ဖူးသောအရာများ၊
အကြှနျုပျ၏စိတျကိုအများကြီးသာယာတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကရာသီဥတုခဲ့လျှင်ရှင်းလင်းရန်မုန်တိုင်းထန်ထံမှပြောင်းလဲပြီလိမ့်မယ်။ ကအရောင်ရှိခဲ့လျှင်အဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖို့မှောင်မိုက်မီးခိုးရောင်ကနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်။
ငါ PMO မလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်တယ်။ (မင်းဘယ်တော့မှမလုံခြုံဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါအခုငါခံစားနေရတာပဲ)
(မြားစှာအတှကျအကြှနျုပျအဘို့ nofap တစ်ခုသက်ရောက်ခဲ့ပေမယ့်မပေးကြောင်း) ကိုတက်ပျော်စေနှင့် tidier ဖြစ်လာ။
ငါ့အသက်ကိုအကြောင်းကိုသည်အခြားပစ္စည်းပစ္စယထွက် sort ။
http://yourbrainonporn.com (nofap အသစ်မဟုတ်ပေမယ့်တစ်ဦးကိုဖတ်ရှုရမည်ဖြစ်သည်ဖြစ်ပါတယ် !!)
Roy Baumeister မှ“ Willpower - အကြီးမြတ်ဆုံးလူ့ခွန်အားကိုပြန်လည်ရှာဖွေဖော်ထုတ်သည်
မိမိကိုယ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့် ဦး နှောက်သည် -Norman Doidge မှ
Eckhart Tolle မှ“” ယခုပင်တန်ခိုး”
Kelly McGonnigal မှ "The Willpower ဗီဇ"
Eckhart သေဆုံးသူ http://www.youtube.com/watch?v=Bsf7FXPgQ_8
ကယ်လီ McGonnigal http://www.youtube.com/watch?v=V5BXuZL1HAg
TLDR: ကျွန်တော့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီးသင် 30D အမှတ်အသား၊ အကြားဖြစ်ပျက်မှု၊ ကျွန်ုပ်သတိထားမိသောအပြောင်းအလဲများနှင့်နောက်ထပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကူညီရန်အလွန်ကောင်းသည့်အရာများစာရင်း။ ငါအရမ်းခံစားရတယ်!
PMO မပါဘဲတစ်လလုပ်ပြီးပြီဆိုတာမယုံနိုင်ဘူး! ဒါကိုမင်းရဲ့ထောက်ခံမှုမပါဘဲလုပ်လို့မရဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့အားလုံးကိုကြီးကြီးမားမားပြောချင်တယ် !!! ပြီးတော့မင်းရဲ့ခရီးတွေအတွက်မင်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။